Fantaro Ny Tontolon’ny Bilaogy Qatari · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Desambra 2017 2:20 GMT
(Marihina fa tamin'ny 16 Aprily 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Namaritra ny fanjakana Qatar bitika kanefa manankarena ho “Firenena kely be fitiavana” ny mpitsangatsangana nandritra ny andro fankalazana ny fahaleovantenany farany. Na dia famaritana tsy manam-paharoa aza izany dia mbola maro amin'ireo ao amin'ny faritra no mieritreritra an'i Qatar ho toy ny “firenena bitika manam-bava ” satria manohana ara-bola sy mampiantrano ny Fantsom-baovao AlJazeera izy izay toa niteraka resabe hatrany.
Tsy mahagaga raha maro ny bilaogy no nitodika tany amin'i AlJazeera. Anisan'ny nalaza indrindra tamin'izany ny ” “Aza Darohana Baomba Izahay – bilaogy avy amin'ny mpiasan'ny AlJazeera” izay nosoratana rehefa nipoaka ny vaovao fa nihevitra handaroka baomba ny foiben-toeran'ny fantsona ao Doha sy ny bilaogy AlJazeera Talk i Etazonia. Mazava ho azy, nisy ihany koa ny mpiasa maromaro no namahana bilaogy tamin'ny fahaizany manokana – toy ny mpanolotra fandaharana Faisal AlCasim sy Stef ilay mpanolotra ny fandaharan'ny toetr'andro .
Maro mpila ravinahitra i Qatar ary azo itarafana izany ny tontolon'ny bilaogy Qatari. Ho hitanao ireo bilaogy nosoratan'ireo olona avy amin'ny tontolo mandroso sy andalam-pandrosoana (ary misy ihany koa ny avy amin'izy roa ireo izay nosoratan'i Qataris!). Nanomboka ny Tetikasan'ny Bilaogy Qatar ny Qatar Living tamin'ny taon-dasa mba hampiroboroboana ny famahanana ny bilaogy ao Qatar sy hanampiana ireo bilaogera avy ao Qatar hifandray. Manana bilaogy mihoatra ny 40 izy amin'izao fotoana izao ary mbola hiampy hafa maro izany!
Ireto ny sasany amin'ireo endrika misongadina indrindra ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Qatari:
Aisha, mpianatra Qatari 21 taona ao amin'ny Oniversiten'i Qatar, izay niezaka nampifandray ireo vahiny mpila ravinahitra tamin'ireo mponina ao Qatar.
Marjorie, Amerikana iray miasa ao amin'ny Carnegie-Melon ao Qatar ary mamahana bilaogy matetika momba ny maha-olombelona, ​​ny vehivavy ary ireo zo hafa any Qatar.
Camper, Miozolomana mpila ravinahitra avy any Grande-Bretagne izay nahazo jeripejy miisa 10.000 mahery (izay tena goavana ho an'i Qatar) tamin'ny lahatsoratra iray momba ny fomba fahitany ny Piglet izay voarara tao amin'ny fivarotam-boky iray .
Jereo ity toerana ity ho an'ireo feo mahaliana kokoa avy any Qatar!